Eziqhelekileyo kwiLifa lePaki yeDolophu #6 **KUKAMPUSI!**
Iflethi okanye indlu ekwi-complex (icondo) yonke sinombuki zindwendwe onguJosh
I-condo entsha eyakhiwe KWIKAMPUSI kwiYunivesithi yaseHarding!
Ifakwe kwicala elingasentshona lekhampasi kufutshane ne-Starbucks kwaye kukuhamba ngemizuzu elishumi ukuya kwindawo esanda kuhlaziywa yedolophu yaseSearcy, ineevenkile zayo ezinkulu kunye neendawo zokutyela!
Nokuba ungu-HU Alumni, umzali ondwendwelayo, okanye oza kuba yiNyothi, uya kukuthanda ukuphila njengomfundi, kodwa ngaphandle komsebenzi! Shiya imoto yakho kwindawo yakho yokupaka, kwaye uhambe ekhampasini ngaphandle kokukhathazeka! Emva koko, buyela kwindawo yakho ekhuselekileyo, ekhululekile, kwaye ecocekileyo ukuze uphumle!
Enye yeendawo kuphela kwikhampasi ekhoyo kuwe! Le ndawo ikhululekile kwaye ilungele yonke into eSearcy! Yonke into yayilungiselelwe wena kunye nokuthuthuzela kwakho.
Le condo isandula ukwakhiwa ngo-2020 kwaye isenalo "ivumba lemoto entsha".
Ikhitshi igcwele izixhobo ezininzi zokupheka kunye nezixhobo, ngoko kufuneka ukwazi ukulungiselela malunga naluphi na ukutya "okuphekwe ekhaya". Ityuwa, iPepper, kunye neziqholo ezisisiseko nazo zibandakanyiwe.
Igumbi lokuhlamba ligcwele kwaye libandakanya iwasha enomthamo ophezulu kunye nesomisi.
Igumbi lokulala ngalinye linomabonakude, indawo eninzi yomthwalo wakho, ifeni yesilingi, kunye nefeni eliphathwayo. Iibhedi zikhululekile kwaye amagumbi amnyama, ngoko unokuphumla kakuhle emva kosuku lokuhlola.
Le yunithi iphezulu kwizinyuko enye.
Singomnye weendawo ezimbalwa ezikhoyo kwikhampasi yeYunivesithi yaseHarding. I-condo ihamba umgama kuyo yonke into ekwikhampasi kunye neevenkile ezisezantsi zeSearcy kunye neeresityu.
Ndifumaneka ngombhalo, umnxeba okanye i-imeyile